Etu ị ga - esi mee ka ndị ọrụ gị nwee obi ụtọ mgbe ị na - ewepụta Nnukwu Mmelite na Ngwa Gị | Martech Zone
Enwere esemokwu pụta ụwa na mmepe ngwaahịa n'etiti mmelite na nkwụsi ike. N'otu aka, ọrụ na-atụ anya ọhụrụ atụmatụ, arụmọrụ ma eleghị anya, ọbụna a ọhụrụ anya; n'aka nke ọzọ, mgbanwe nwere ike ịdapụta mgbe ihe ndị ị maara na mberede ga-apụ n'anya na mberede. Esemokwu a kachasị ukwuu mgbe a gbanwere ngwaahịa n'ụzọ dị egwu - nke na enwere ike ịkpọ ya ngwaahịa ọhụrụ.
At Akuko anyị mụtara ụfọdụ n'ime ihe mmụta ndị a n'ụzọ siri ike, n'agbanyeghị na anyị bidoro n'oge mmepe anyị. Na mbu, igodo uzo nke ngwa anyi di na akara ngosi di n’elu peeji a:
N'agbanyeghị uru dị mma nke nhọrọ a, anyị nwere oke mmetụta site n'ohere ohere dị, ọkachasị mgbe ndị ọrụ anyị na-elele ngwa ahụ na obere igwe ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka. Otu ụbọchị, otu n’ime ndị mmepe anyị rutere ọrụ n’ụtụtụ Mọnde ya na mkpụrụ osisi nke ngwụcha izu a na-ekwughị ọkwa: ihe akaebe nke echiche mgbanwe na nhazi. Isi nke mgbanwe na-emegharị igodo ahụ site na ahịrị tinyere elu ihuenyo ahụ na kọlụm n'akụkụ aka ekpe:
Ndị otu anyị chere na atụmatụ ahụ dị oke mma ma, mgbe anyị gbakwunyechara aka, anyị hapụrụ ya ndị ọrụ anyị n'izu ahụ na-atụ anya na ha ga-enwe obi ụtọ. Anyị ezighi ezi.
Ọ bụ ezie na ndị ọrụ ole na ole nabatara mgbanwe ahụ ozugbo, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu enweghị obi ụtọ ma kọọ na ha nwere nsogbu na-agagharị na ngwa ahụ. Otú ọ dị, mkpesa kasịnụ ha nwere abụghị na ha enweghị mmasị na nhazi ọhụrụ ahụ kama na ọ jidere ha na nche.
Ihe mmuta: Mgbanwe emere nke oma
Oge ozo anyi gbanwere ngwa anyi, anyi jiri usoro di iche. Isi nghọta anyị bụ na ndị ọrụ na-achọ ijikwa ọdịnihu ha. Mgbe ha na-akwụ ụgwọ maka ngwa gị, ha na-eme ya maka ebumnuche, ha achọghị ka ewepụrụ ha atụmatụ ha niile.
Mgbe anyị mechara interface ọhụrụ anyị, anyị ahapụghị ya. Kama nke ahụ, anyị dere blog banyere ya ma kesara ihuenyo anyị na ndị ọrụ anyị.
Ọzọ, anyị gbakwunyere bọtịnụ maka nnabata nnabata na ngwa anyị nwere nnukwu isiokwu, ụfọdụ okike eji nlezianya rụọ na nnukwu oroma na-anabata ndị ọrụ iji nwalee ụdị ọhụrụ ahụ. Anyị achọpụtakwara na ha nwere ike ịlaghachi na nke mbụ ahụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ (nwa oge).
Ozugbo ndị ọrụ nọ na nsụgharị ọhụrụ ahụ, usoro achọrọ iji laghachi azụ dị ọtụtụ clicks na ntọala profaịlụ onye ọrụ. Anyị achọghị izochi bọtịnụ ahụ ịlaghachi, mana anyị echeghịkwa na ọ ga-aba uru maka ndị mmadụ ịtụgharị na-aga n'ihu ugboro ugboro, nke nwere ike ịnwa ọnwụnwa ma ọ bụrụ na a na-ahụ bọtịnụ ahụ ozugbo. N'ezie, ọ bụ naanị otu onye ọrụ weghachitere oge ọnwa-ogologo oge. Ọzọkwa, site na oge anyị tụgharịrị ngbanwe ahụ wee mee ka ụdị ọhụụ dị mkpa maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ anyị kacha arụ ọrụ agbanweela ma nye anyị nnukwu nzaghachi na ụdị ọhụrụ ahụ.
Na mgbakwunye na ihe mkpali in-app anyị nyere maka ịgbanwee, anyị zigara ọtụtụ ozi ịntanetị na-eme ka ndị ọrụ mara kpọmkwem mgbe mgbanwe nke ụdị ọhụrụ ahụ ga-adịgide. Ọ dịghị onye jidere na nche ma ọ dịghị onye mere mkpesa. N'ezie, ọtụtụ ndị ọrụ nwere obi ụtọ na ọhụụ ọhụrụ ahụ.
Nsogbu Ndị Bara Uru
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dị mkpa iburu n'uche na ịhapụ mmelite n'ụzọ a abụghị n'efu. Ndị otu mmepe gị ga - ejigide ụdị abụọ dị iche iche nke otu codebase yana ị ga - edozi nsogbu dị mgbagwoju anya gbasara etu esi eziga nsụgharị ndị ahụ maka ndị ọrụ njedebe. Ọgwụgwụ nke usoro a ga-agwụ ike na mmepe gị na otu ndị na-emesi obi ike, mana ị ga-ekwenye na itinye oge na ihe onwunwe dị mma. Na ahịa sọftụwia hyper-asọmpi, ị ga-emerịrị ndị ọrụ obi ụtọ ma ọ nweghị ụzọ ọ bụla iji mee ka ha nwee obi ụtọ karịa ịgbanwe interface gị na mberede.
Tags: ngwaikpefleetobi ụtọ ndị ahịantọhapụ ọhụrụn'elu ikpo okwu
Jun 14, 2017 na 7:54 AM
Ohaneze, mgbe anyị na-emelite ọhụrụ ngwa anyị na-ahụ na ochie bụ ka nọ n'ọrụ mode ruo mgbe ndị mmadụ nweta nkwalite ya ka ọhụrụ version. Ahụmahụ ọjọọ ọ bụla ga-amanye onye ọrụ ịhapụ ọrụ gị. Ọ dị oke mkpa maka azụmaahịa inwe nghọta ahụ tupu ịmalite ngwa ọhụrụ.
Na mgbakwunye, jụọ ndị mmadụ ka ha nye nzaghachi. Ihe ohuru ohuru bu oge ndi mmadu choro ka ha kwue echiche ha banyere ngwa. Ọ bụrụ na ha nwere ihe ọhụrụ n’obi ha ga-eso gị keta. Ọ ga --emepụta ọhụụ maka onye nrụpụta gị iji tinye atụmatụ ndị mmadụ na - atụ aro.
Aug 15, 2017 na 5: 47 AM
Mgbe anyị zigara ndị ahịa anyị ozi ịntanetị banyere isi mgbanwe na weebụsaịtị. Anyị na-eme ka ha nweta weebụsaịtị ochie ọ bụla ma ọ bụrụ na ha chọrọ. Ọ na-eme ka ahụ ruo ha ala mgbe ha na-eme nchọgharị na ya. Ọzọkwa, ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike ọ gaghị amasị gị ọhụrụ imewe otú a ụdị ọrụ nwere ike ngwa ngwa ka ndị okenye version mfe.